"Avia, mihainoa ianareo rehetra izay matahotra an’Andriamanitra, fa holazaiko izay nataony ho an’ny fanahiko… Efa nihaino ny feon’ny fivavako Izy… Isaorana anie Andriamanitra." Salamo 66:16,19, 20
Nitady ahy Ianao, ry Tompo, nandritra ny fahazazako, izay tsy nananako ny tena nilaina. Nitady ahy Ianao, fony aho diso lalana raha nikaroka Ilay Andriamanitra toa lavitra dia lavitra…
Niteny tamiko Ianao, ry Tompo, nandritra iny ady mahatsiravina iny, niteny tamiko Ianao, na dia tsy fantatro aza ny feonao. Niaro ahy Ianao, ary nitsimbina ahy. Niantso ahy Ianao, ry Tompo, ary nampahafantatra ahy fa tena teo Ianao, na tsy hitan’ny masoko aza. Nitrotro ahy Ianao, raha kivy aho; nanam-paharetana Ianao, ry Tompo, raha nihemotra aho, nandositra, naditra, nanana lolom-po nanoloana ny toa fanginanao. Namela heloka ahy mandrakariva Ianao, ry Tompo, raha nihataka aho, nandà tsy hiaraka aminao, nikatsaka tontolo izay fantatro fa tsy afaka hisy Anao mihitsy…
Niaro ahy Ianao, ry Tompo, raha iny efa hivarina tany anaty hantsana iny aho, ka nohazoninao mafy ny tanako, ary naverinao tam-pitiavana tao amin’ilay hany lala-marina aho. Mangingina ary tsy reko akory ny nakanao ny toerana tokony ho anao eo amin’ny fiainako, dia ilay manakana tsy hihatsaravelatsihy, manery hijery ny tena araka izay marina, eo ambany masonao. Nampianarinao aho hanaiky ny lesona nomen’ny fitiavanao, hanala ireo tsilon’ny lasa tsy ho ao am-poko, hitodika any amin’ny hazavanao, hanaraka Anao eo amin’ilay lalana voaravaky ny fanatrehanao tsy miovaova, mampitombo, mandresy lahatra, mampahery, ahafahako miroso am-piadanana sy am-pifaliana. Nahita ahy Ianao, ry Tompo, nisintona ahy ho any aminao, ka nanome ahy antoka tsy azon’iza na iza esorina amiko.
Te hiantsoantso amin’ny hafa aho hoe aza avela handalo fotsiny ny fotoana, te hiangavy azy tsy hampiandry Ilay manolo-tanana sy miteny aminy hoe: “Mankanesa aty; amiko”.